Ciidanka Kumaandooska oo burburiyay gaari waxyaabaha qarxa lagu diyaariyay - Home somali news leader
Home NEWS Ciidanka Kumaandooska oo burburiyay gaari waxyaabaha qarxa lagu diyaariyay
Ciidanka Kumaandooska oo burburiyay gaari waxyaabaha qarxa lagu diyaariyay
Ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ay fuliyeen meel 18KM u jirta deegaanka Tooratoorow ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ku burburiyeen gaari waxyaabaha qarxa lagu diyaariyay.
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in gaariga qarxa ee la burburiyay ay doonayeen in Al-Shabaab u adeegsadaan in weeraro qorsheysan ku fuliyaan.
Taliyaha Guutada 16aad ee Kumaandooska xoogga dalka ee DANAB Axmed C/llaahi Nuur Beeryare ayaa sheegay in howlgalka ay ku qabteen saddex xubnood oo gaariga qarxa diyaarinayay.
Sidoo kale Taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalkan uu yimid, kaddib markii ay ka war heleen in Al-Shabaab ay gaari waxyaabaha qarxa ku diyaarinayaan oo ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Ma jirto illaa iyo hadda muuqaal ama sawiro ay soo bandhigeen ciidanka Kumaandooska oo caddeynaya ragga ay soo qabteen iyo gaariga qarxa ay burburiyeen.
Howlgalada ay fuliyaan Ciidanka Kumaandooska ayaa waxaa kala qeyb qaata Ciidamada Mareykanka, inkastoo Mareykanka uu ciidankiisa inta badan kala baxay Saldhiggooda weyn ee Balli-doogle, balse weli Mareykanka waxaa uu wadaa duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab.
Previous articleMurkowski’s first Republican senator urging Trump to resign
Next articleAxmed Madoobe oo farriin u diray Madaxweyne Farmaajo, kuna baaqday shir la isugu yimaado